Barkhad Abdi, oo ku guulaystay Xiddigga filimka Captain Phillips (Video+Sawiro)
Barkhad Abdi, oo ku guulaystay (Xiddigga filimka) ee sanadka Barkhad Cabdi ayaa ku guulaystay abaalmarinta BAFTA ee caawiyaha jilaaga ee ugu fiicnaa sanadkan ee filimka Captain Phillips. Wuxuu filimkan ku saabsanaa burcad badeed Soomaaliya. waxaa uu ka guulaystay jilayaasha Michael Fassbender iyo Matt Damon. “Bafta iyo Paul Greengrass waxay igu aamineen (doorkan) ka hor intii […]
ahniyad Aroos Sahra Burhaan Kuukuuyo, iyo Cabdulqaadir Axmed Dhalo Cadde
Waxaa halkan tahniyad aroos ka diraya dadka kala ah Hoyo ayan ka bilabaya Ayeyo asha sheq sahal Eedo run kuukuye Eedo nacimo kuukuye Eedo sacdiyo kuukuye Eedo tarig kuukuye Ader buujiye kuukuye Aabe Burhaan Kuukuye Iyo dhammaan reer Kukuye Hooyo fadumo haji Aabo Ahmed Dhalacade iyo dhamman reer dhalacade. Dhammaan dadka kor ku xusan waxay […]
Xaflada si heer sare ah loo soo agaasimay oo lagu maamuusayey Isbedelka Puntland ka dhacay dhanka kalena lagu sogootinaayey madaxdii hore ee Puntland, ayaa wax’ay ka dhacday Caawo ( 22/2/2014) Envoy Continental Islamabad ee Wadanka Pakistan . Xafladaasoo ay soo agaasimay Jaaliyada reer Puntland ee Pakistan waxaa ka soo qeybgalay Marti sharaf kala duwan oo […]
Gabar Soomaaliyeed oo dhibaato iyo calool xumo ku nooleyd in ka badan 20 sanandood ka dib dhaawac halis ah oo ka soo gaarey wajiga oo ay xabad uga dhacday ayaa waxaa la sheegay inay farxad la ilmeysay ka dib markii loo sheegay in qaliin dib loogu hagaajinaayo wajigeeda lagu sameyn doono. Ayaan Maxamed oo ah […]
Shacabka degmada Carmo oo isugu jira dhalinayaro, Haween, iyo Odayaal ayaa shalay oo jimco ahayd u kacay sidii ay u hagaajin lahaayeen Kuliyadii dhamayd ee ciidanka dalka Soomaliya taas oo ku taal Degmada Carmo oo uu ka muuqday wax aysan indhahaagu qaban karin. Ol’olaha nadaafadeed ee dadweynaha ku dhaqan Carmo ay ku sameeyaan Kulliyada tababarka […]
Magaalada Hargeysa Xarunta maamulka la baxay SOomaaliland waxaa ka dhacday arin naxdin leh taas oo qabsatay gabar doonatay deyn ka timid hagbad ama ayuuto ay ku jirtay sida ay shaacinayaan dadweynaha ku dhaqan xaafada ay ka dhacday arintan. Police-ka ayaa sheegay in gabardha ay u doonatay qoys deyn ay ku lahayd balse is afdhaaf ka […]
Cajiib: Bidaarta oo loo helay Daawo Difaac u ah, (Aqri)
ida la xaqiijiyay waxaa la helay daawo rasmi ah oo uu qofka leh bidaarta kula tacaali karo in uu dib usoo celiyo tintiisa daawada ayaa sida ay shegeen dhaqaatiirta waxaa laga sameeyay dhir. Arrintan ayaa soo shaac baxday kaddib marii tijaabo ahaan ay u isticameel shaqsiyaad badan oo lahaa bidaar kaddibna sheegay in ay tintodii […]
Halkan waxaan ku falanqeyn doonaa arimo badan oo la xiriira sida uu qaadka u yahay shey umada somaaliyeed meel ay joogtay u naceen,waxaana taaas cadeynteeda soo baxday markii gabi ahaan laga joojiyay dalka ingiriiska Ka dib markii somali badan oo halkaasi ku sugan dareemen dhibaatada uu ku hayo. Somali badan oo ku kala nool wadamo […]
Inkastoo marar kala duwan aan soo bandhigay waxyeelada iyo dhibaatada Qaadku u leeyahay bulshada somaliya hadana waxaan isku dayi doonaa in aan halkan ku bayaaniyo Warbixino kala duwan oo aan ka soo aruuriyay wargeyyadda ka soo baxa dalka kenya,kuwaasi oo qaabab kala duwan kaga hadlay isku dayga kenya ee in qaadka loo furo wadamo badan […]